Ngomhla we-13 kaMeyi, i-Oukitel K9 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwiminyaka yakutshanje, inkampani i-Oukitel isungule iitheminali ezahlukeneyo kwintengiso, uninzi lwazo lunomgangatho wexabiso elifanelekileyo. Qho ngonyaka, isungula iimodeli ezahlukeneyo kwaye kulo nyaka, enye yeeflegi zayo eziphambili yi-Oukitel K9, Isiphelo sendlela esingaphambili phantse sonke isikrini.
I-Oukitel K9 isibonisa uyilo lwangaphambili olufana nolo lufumaneka kuluhlu lwe-P30, nge ithontsi lamanzi ngaphezulu enkulu Iscreen se-intshi eyi-7,12, isikrini esikwi-HD + epheleleyo. Ukuba ujonga i-terminal enezinto ezintle kunye nescreen esikhulu, i-Oukitel K9 inokuba sisiphelo osikhangelayo.
Enye into etsala ingqalelo yale ndawo yokuphela kwebhetri, a Ibhetri efikelela kumawaka angama-6.000 mAh, kwaye esingadlala ngayo kwaye sibukele iividiyo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokulayisha i-terminal. Ibhetri ye-Oukitel K9 igcwaliswe ngokupheleleyo kwiiyure nje eziyi-1,5, ngenxa yenkqubo yokutshaja okukhawulezayo kunye nokwenza ukusetyenziswa kwesiqhelo kwesiphelo, sinokuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki kangangeentsuku ezi-2 okanye ezi-3.
Isikrini se-7,12-intshi kunye nesisombululo esigcwele se-HD + (2244 × 1080), sinomlinganiso we-19: 9, Ilungele ukubukela naluphi na uhlobo lwemovie okanye uthotho kwisiphelo sendlela. Ukulawula esi siginali, i-Oukitel ikhethe iprosesa yeMediaTek Helio P35, iprosesa eyi-8-core 2,3 GHz, zonke zikhatshwa yi-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi.
Ikhamera, enye inkalo abasebenzisi abayithathela ingqalelo kakhulu, yile yenziwe nguSony, ubuncinci i-16 mpx ephambili, ikhamera ehamba kunye ne-2 mpx. Umphambili ufikelela kwi-8 mpx. Esi sisiphelo sonwabela yonke imisebenzi evela kwisandla se-Android 9.
I-Oukitel K9 iya kufumaneka ngemibala emibini: emnyama neblue eqaqambileyoiyahambelana nenethiwekhi ye-2G, 3G kunye ne-4G. Ixabiso layo nje ukuba lifike kwimarike liza kuba yi- $ 249,99, kodwa ukuba sisebenzisa isibonelelo sokumiliselwa, sinokuyifumana nge- $ 199,99 kuphela, Oko kukuthi, siya kuba nakho ukusebenzisa isibonelelo ukusuka ngoMeyi 13 ukuya kumhla wama-20. .
Ukuze ukwazi ukusebenzisa eli thuba, kuya kufuneka ucofe koku Ikhonkco leBangood okanye nge Aliexpress.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Oukitel » Ngomhla we-13 kaMeyi, i-Oukitel K9 sele igcinwe